Usoro ihe omume Microsoft na 10 ga-agbanwe ụzọ ị na-eche | Ọ BỤ
Usoro ihe omume Microsoft na 10 ga-agbanwe ụzọ ị na-eche
"Ndị enyi anyị nọ na ụlọ ọrụ anyị na-ekpe anyị ikpe mgbe nile, echekwara m na [Asambodo Microsoft] bụ ụzọ dị egwu iji gosi na ị na-eme ezi ihe n'omume gị, na iji gosi ndị ọzọ na ị nwere ihe ọ ga-ewe iji mee nzọụkwụ dị mkpa. Ụfọdụ n'ime Ọzụzụ Microsoft na Ntuziaka bụ ndị a:
Windows Azure Solutions na Microsoft Visual Studio 2010
IZIRỊTA na Microsoft Windows server 2012
Njikwa Microsoft Windows Server
Microsoft Center Center 2012 Orchestrator SCOM
Sistemụ Microsoft SQL Server 2014 Data
Microsoft Office 365 Mgbakwunye
Onye nhazi Microsoft Exchange Server na Nche
Nkụzi Ọzụzụ Microsoft na Nkwekọrịta
1. Windows® Azure ™ Ngwọta na Microsoft® Visual Studio® 2010
Ntanetị mgbasa ozi
2. Ịmalite na VBA na Excel 2010
Ntak Jiri VBA na Excel 2010?
3. Windows Server 2016 Ọzụzụ: IZIRỊTA
4. Njikwa Windows Server isi: MTA Nyocha 98-365
5. Ogige System 2012 Orchestrator
6. Sistemụ Microsoft SQL Server 2014 Data
7. Microsoft Office 365 Mgbakwunye
9. Onye nhazi Microsoft Exchange Server na Nche
Ndi nyocha ndi ozo
10. Nchịkọta 2013 Microsoft Exchange Server
Usoro ọzụzụ Microsoft a na nnyemaahịa bụ prolog ka a na-ekesa kọwapụta na karịsịa igwe ojii igwe ojii nke Microsoft na Windows Azure. Windows Azure egosiputa Microsoft dị ka usoro ọrụ maka "igwe ojii" ahụ. Na klas a, ị na - enyocha igwe ojii a na - arụ ọrụ ma chọpụta otú e si ede akwụkwọ, ibu na ihuenyo NET ngwa ngwa na Azure.
A na-atụle klas a maka ndị mmepe NET na ngwa ngwa weebụ nke na-eme nchọpụta na-eto eto ọhụrụ ma ọ bụ na-abanye ngwa ngwa na Windows Azure
Na ngwụcha nke usoro a, nchịkọta ga-enwe ike:
Comprennd kesara kọwaa na akụkụ dịgasị iche ya na otu Windows Azure si daba na ebe mgbagwoju anya kesara.
Mata ihe mere ndi otu ndi choro iji gbasaa n'igwe ojii Azure.
Chọpụta njikwa nke Azure.
Nyochaa ebe Azike SDK na ebe obibi mma (Compute na Nchekwa Emulators).
Chọpụta otu esi emepụta ngwa maka azure na otú mgbanwe ndị si na nha ọganihu NET.
Dee ma tinye ihe ASP.NET Web ngwa (Ọrụ Web) na Azure.
Nyochaa otu esi eme ma nyefee ntọala ntọala (Ọrụ Ọrụ) na Azure.
Nyochaa ikike Azure Nchekwa iji tinye okpokoro, eriri na blob.
Nyochaa SQL Azure, nchekwa nchekwa mmadụ na igwe ojii.
Na-eche echiche otú SQL Azure si dị iche na Azure Storage.
Na-egosi Visual Basic maka Ngwa (VBA) na Excel 2010 gaa na Excel akara onye na-abughi onye injinia software. Isiokwu a gunyere ederede nke asụsụ VBA, ntụziaka na ụzọ kachasị nke ọma iji nweta VBA na Excel 2010, isi site na nkọwa nke nzaghachi maka mbipụta mmemme Excel VBA n'ezie, na ntụziaka maka mmemme na nyocha. Ntak Jiri VBA na Excel 2010?
Microsoft Excel 2010 bụ ngwá ọrụ dị ịtụnanya ị nwere ike iji jikwaa, dissect, na gosipụta ozi. Otú ọ dị, n'agbanyeghị ndokwa bara ụba nke ihe ndị dị na Excel (UI) ziri ezi, ị ga-achọ ịchọta ebe dị egwu ịchọrọ ịrụ ọrụ na-enweghị atụ, ma ọ bụ ịrụ ọrụ ụfọdụ na UI adịghị yiri ka adreesị. N'ụzọ dị nro, Ngwaọrụ Office dịka Excel nwere Visual Basic maka Ngwa (VBA), olu mmemme nke na-enye gị ikike iji mekwuo ngwa ndị ahụ.
VBA na-arụ ọrụ site na ịmegharị macros, usoro iwu nyere iwu nke edere na Visual Basic. Na-atụle otú e si ememme nwere ike iyi ka ọ na-emenye egwu, ma site na nkwụsi ike na ihe atụ ole na ole, dịka ọmụmaatụ, ndị dị n'isiokwu a, ọtụtụ ndị ahịa na-achọpụta na ime mgbanwe ọbụna obere ntakịrị koodu VBA na-eme ka ọrụ ha ghara ịchọrọ ma nye ha ikike ime ihe na Office na ha ekwenyeghi na ha nwere ike ichepụta. Mgbe ị megharịrị ụfọdụ VBA, ọ ga-eme ka ọ dị mfe karị iji mee ka ọgba aghara karị-ya mere, ihe ndị a pụrụ isi na ya pụta bụ enweghị njedebe.
Site na ogologo oge, ihe mgbagwoju anya a na-enwekarị iji VBA na Excel mee ihe bụ iji na-eme ka ọrụ zuru ezu kwụsị. Dị ka ọmụmaatụ, chee na ị nwere akwụkwọ ntuziaka iri na abụọ, nke ọ bụla nwere akwụkwọ edemede iri na abụọ, nke ọ bụla n'ime ha chọrọ mgbanwe ụfọdụ maka ya. Ọganihu a nwere ike ịdị mfe dịka itinye nhazi ọhụrụ maka ụfọdụ mkpụrụ ndụ ma ọ bụ dị ka ị na-atụgharị uche ka ị na-ewere gander n'ụdị ụfọdụ nke ozi dị na mpempe akwụkwọ ọ bụla, na-ewere ụdị eserese kacha mma iji gosipụta ozi na àgwà ndị ahụ, na mgbe na ịme na ịhazi ụdị eserese ahụ.
N'ọnọdụ ọ bụla, ọ ga-abụ na ọ gaghị adị gị mkpa igosipụta ọrụ ahụ n'ụzọ anụ ahụ, ma ọ bụ na ọ bụghị ihe karịrị. Kama nke ahụ, ị ​​nwere ike ịmegharị ọrụ ahụ site n'iji VBA mee ihe maka ntụziaka na-enweghị ntụpọ maka Excel iji mee.
VBA abughi nani maka oru ugha. Ị nwere ike iji VBA rụọ ọrụ ọhụrụ na Excel (dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike ịmepụta atụmatụ ọhụrụ iji nyochaa ozi gị, wee jiri ike ịchọpụta ihe na Excel iji gosi nhụpụta ya), na ịrụ ọrụ nke na-ahazi Excel na ngwa ndị ọzọ Office, dịka ọmụmaatụ, Microsoft Access 2010. Eziokwu ka a gwara, nke niile Office Office, Excel bụ otu a na-eji dị ka ihe na-ewe mgbe a n'ozuzu ọganihu ogbo. N'agbanyeghị mmemme niile a ma ama nke na-agụnye ndekọ na akwụkwọ nlekọta akwụkwọ, ndị mmepe na-eji Excel na-eme ihe n'ọtụtụ ozi site na nghọta ọmụma na mmepụta prototyping.
N'agbanyeghị ihe ka ukwuu n'ime mkpali dị ukwuu iji jiri VBA na Excel 2010, cheta na azịza kasị mma maka ihe iseokwu agaghị agụnye VBA n'ụzọ ọ bụla. Enweghi olile anya nwere otutu ihe di iche iche obuna na enweghi VBA, ya mere obula onye nwe ike nwere ike ghara imata ha nile. Tupu ị kwadoo na ndokwa VBA, lee Enyemaka na akụ online iji hụ na ọ dịghị ụzọ dị mfe.
Windows Server 2016 na-enye usoro ọrụ nlekọta ọhụrụ na ikike ndị na-ebelata ịhazi ọtụtụ ihe dị iche iche mgbe ị na-ewetu mmefu ego na ịkọpụ ọrụ nlekọta. Ihe ndị a gụnyere:
- Adreesị IP Adreesị (IPAM). Nke a na-enye usoro nke na-enye mkpughe, nchịkwa, na ịlele ntinye ederede IP n'ime usoro njikọ.
- Igwe Ngwongwo Hyper-V Network. Nke a bụ ngwaahịa a na-ahazi ndokwa (SDN) nke na-enye gị ike ịmepụta nsogbu ndị na-eme mgbanwe n'ime ihe ntanetị gị site na kọmputa (VM) adreesị IP site na usoro nhazi nkịtị nke na-elekọta ma na-eduzi, dị ka ụzọ nke VM si echefu ya nke onye na-ahụ maka ya.
- Mgbanwe-agbanwe ọkụ na Hyper-V. Nke a na-enye atụmatụ iji dozie ndokwa a chọrọ maka nchekwa, nchekwa, afọ ojuju, na ụlọ obibi.
- NIC Nhazi. Site na akpa na-ahazi kaadị kọntaktị (NIC) ijikọta bụ ikike iji mee ka ọ dịkarịa ala njikọ abụọ jikọtara na PC naanị ka ọ bụrụ NIC naanị otu n'ime Windows.
Ọzụzụ ọzụzụ MTA a na-enyere gị aka ịme atụmatụ maka Nyocha 98-365 nke Microsoft Technology, ma mepụta nghọta nke isiokwu ndị a: Ntọala Server, Ọrụ Ngwá Ọrụ, Ọrụ Ọrụ, Nchekwa, Management Server Performance, na Nchekwa Ntanetị. Omume a na-emetụta ihe na-enweghị ike ịchọta ihe dị na Ụlọ Ọrụ Ọmụmụ (Microsoft) nke Ụlọ Ọrụ (MOAC) maka ule a.
Microsoft Technology Associate (MTA) bụ nyocha nke mmemme ọhụrụ nke Microsoft nke kwadoro ihe mmụta dị oke mkpa nke a na-atụ anya na ọ ga-amalite ịmepụta ọrụ iji mgbasa ozi Microsoft. Usoro a na-enye akụkụ nke kwesịrị ekwesị na-egosi ọrụ dị n'ihu n'ọdịdị ọhụrụ ma na-atụ anya na ntinye aka ma ọ bụ ịkwado ihe ọbụla adịghị anabata na ọrụ nghọta.
Ịkwụnye Ntọala Ngwaọrụ
Dekọọ Ọrụ Ngwá Ọrụ
Ọrụ Active Directory
Nyochaa njikwa arụmọrụ na njikwa
Usoro nkuzi Microsoft a na ntinye akwụkwọ nkwekọrịta na-eme ka mmụta dị mkpa iji nhazi, zipụ, ma debe Microsoft System 2012 Orchestrator System System. N'akwụkwọ a, ndị na-eme ihe ọmụma maara ihe dị iche iche dị na System Center, ma mesịa chọpụta otú e si kọwaa Orchestrator 2012 ma tinye ya n'ime Ụlọ Ọrụ Systems. N'otu aka ahụ, usoro a na-agụnye usoro nhazi usoro iji kwado ọnọdụ dịgasị iche iche, nke nwere ike ịnweta na gburugburu ebe azụmahịa. N'ịbụ ndị na-amị mkpụrụ, ihe nchịkwa ga-enwe ihe ọ dị mkpa iji lelee 2012 Orchestrator maka ọganihu kachasị ahịa. Usoro a na-eme ka oghere ndị mmadụ na-amụba, n'ihi ya, nchịkwa nwere ike ịrụ ọrụ n'itinye ngwọta ahịa n'ọnọdụ ezi ọnọdụ.
Usoro nkuzi nke Microsoft a na ntinye aka maka ndi ọkachamara IT nke dị ugbu a nwere mmụta pụrụ iche maka usoro nlebara anya ha na 2012 nke Orchestrator. Nke a bụ maka ndị ọkachamara IT dị mkpa ka ha ghọta akụkụ bụ isi nke ụlọ ọrụ ahụ. nwere ike ịchọrọ ịhazi kọmputa.
Kọwaa akụkụ nke 2012 Orchestrator na usoro System Center dum
Nye nyochaa ITIL na MOF
Gwa ma dozie 2012 Orchestrator
Gbanwee, gbanwee na nhazi 2012 Orchestrator
Hụ ihe nchịkọta ọsọ ọsọ maka ederede Windows
Nwee akwukwo akwukwo oganihu eji eme ihe
Idozi mmepụta nghazi maka ndi ọzọ System System na ihe Microsoft
Mmebi mmebi nke ndudue na-elekọta ma na-edebanye aha
Emebie usoro ngbochi ọdachi
Mmegbu na nyocha nchọpụta na 2012 Orchestrator
Usoro MCSS SQL Server 2014 Data Platform kwere ka ndị ọkachamara IT nwee ike ịmepụta ma jigide nnukwu ụlọ ọrụ ígwé ojii ma ọ bụ ihe ngwọta nke mmalite. Omume a zuru oke maka ndị nlekọta nchekwa data bụ ndị na-elekọta atụmatụ na ilekọta ọdụ data na nnukwu ọnọdụ azụmahịa. Akwụkwọ nchịkwa MCSE na mgbasa ozi ga-eme ka ndị òtù nwee ike ịhazi na ịmepụta nchekwa data, gụnyere ike, isiokwu na sava.
Ndị a họọrọ maka usoro a ga-ekpuchi echiche ndị na-esote na SQL Server 2014 na-akwadebe ihe omume:
Ịmepụta, ịmepụta, iwebata, na ịdebe ọdụ data na mmemme Microsoft melite
Ịtụle ma nyochaa nchekwa data nchekwa na SQL Server
Ịjụ SQL 2014 Server
Ijikwa ọnọdụ 2014 Server SQL Server
Ime nkesa ozi nkesa na 2014 server SQL
Na-akọwapụta ngwọta maka data SQL 2014
Usoro ọzụzụ Microsoft a na ntinye aka na ụdị nke Microsoft SQL Server ga-enyere ndị ọkachamara aka ịzụlite ezi uche n'akụkụ ọ bụla nke ilekọta ozi nyocha na ọnọdụ nchekwa data na nke ọma.
Ndị dị mkpa nke ndị na-ahụ anya maka usoro a bụ nchekwa data na nghọta ahịa (BI) ndị ọkachamara maara banyere SQL Server 2008 ma dị mkpa ka ha kwalite ha aptitudes na SQL Server 2014, ma nwee ntụsara ahụ na mgbasa ozi Microsoft metụtara.
Nchịkọta Ọrụ Nchịkọta Microsoft Office 365 maka ụlọ ọrụ na-eweta nkwekọrịta dị nkenke ndokwa usoro echiche na usoro usoro. A na-ahazi onye enyemaka na-ezigaga gaa na ebe na-enye ụdị data dịgasị iche iche na ngalaba nhazi nke gị na mkpakọrịta gị.
Nke a bụ nkọwa dị ngwa nke ihe ị ga - achọpụta:
Ngalaba nchịkọta usoro. Ihe omuma a na-eme ka ala ọjọọ na-ewere gander na ndokwa na ihe ndị dị mkpa iji zipu Office 365. O nwere data bara uru maka ndị isi IT gị, ndị nduzi ihe omume, na mkpochapụ pụrụ iche.
Nhazi ma kwadebe ngalaba. Ngalaba ndị a na-akọwa ọrụ ndị a kapịrị ọnụ na omume ndị a chọrọ iji kwadebe na mezue ndokwa Office 365 gị. Ihe ndị ahụ bụ maka akụkụ kachasị na egosipụtara na arịrịọ ahụ ị na-agwa ha n'agbata ndokwa gị. Egwuregwu na-ekwu maka mpaghara Mpaghara ahụ maka ọtụtụ mpaghara ịlaghachi na mpaghara njikere na ntụziaka maka ime ihe. Atụmatụ na Kwadebe ebe nwere ọdịnaya nke ga-eme ka ụdị ọkachamara ọhụrụ na-emepụta ihe na mkpakọrịta gị.
Ngalaba na-apụ apụ. Mpaghara a na-egosi nhazi maka ịmebanye igbe akwụkwọ ndị ahịa gị na ọnọdụ Office 365 ka ị nwee ike ịmalite iji Office 365 mee ihe dị ka akụkụ nke gburugburu ebe obibi gị.
Usoro nkuzi Microsoft a na nnyemaahịa na-akọwa otú e si depụta ma dozie olu na Microsoft Lync Server 2013 na Lync Online ọchịchị. Usoro a ga-enye gị ozi na ikike ịmepụta ma jikọta Lync Server 2013 na ogige, Lync Online n'igwe ojii ma ọ bụ na nzukọ na-ejikọta ọnụ. Kedu ihe ọzọ, ọ ga-enye ihe nchọta ndị IT ma ọ bụ ndị ọkachamara nkwurịta okwu choro iji mee ka Lync gbadoro ndokwa maka ndokwa olu. Usoro a ga-egosi gị otu esi emepụta Lync Server 2013, ma nyekwa iwu, omume kachasị mma, na ntụgharị uche ga-enyere gị aka ịhazi ndokwa gị. Usoro a na - enyere ndị na - enweghị isi aka maka nyocha 70-337.
A na-atụ anya usoro ọzụzụ Microsoft a & Nlekọta akwụkwọ ịgba akwụkwọ maka ndị ọkachamara IT na ndị na-enye ndụmọdụ ndụmọdụ na kọntaktị na ọ dịkarịa ala ọnwa atọ na-akọwapụta, ịhazi, izipụ, na ịchọta ihe ngwọta maka imekọrịta mmekọrịta (UC) na nkwenye dị mkpa na nnukwu olu azụmahịa n'elu mgbakọ Ịntanetị (VOIP). Ndị na-eme ihere ga-enwe ikike ịkọwapụta ihe ndị dị mkpa maka ịzụ ahịa na nkà mmụta sayensị pụrụ iche na atụmatụ maka ndokwa UC. Ndị na-edozi iwu kwesịrị ịnwe mkpa ngwa ngwa nke Windows Server 2012.
Mee atụmatụ nkwekọrịta olu mgbanwe
Nchịkọta ma dozie ndokwa ochichi maka Lync 2013
Hazie Ngwunye Voice 2013 Lync Server
Na-eleba anya nchịkwa olu okwu nsogbu
Hazie ma hazie Lync Online ma ọ bụ ndokwa ndozi
Usoro ọzụzụ Microsoft na ihe nrite na Gọọmentị Exchange Server na Nche ga-amụta banyere nchịkwa na nhazi nke 2013 mbipụta Microsoft Exchange n'ụzọ dị mfe. Ahịa 2013 bụ ihe si Microsoft nke na-enye nsogbu ntinye akwụkwọ ozi, ntinye akwụkwọ, na ụdị dịgasị iche iche nke ngwa ngwa iji nweta ngwa ngwa kọntaktị na nhazi arụkọtara. Ndị otu ga-enweta nnukwu data gbasara ịhazi, ịhazi, na ilekọta ngwa MS Exchange, dịka ọmụmaatụ, igbe igbe igbe, onye ahịa na-aga, na njem ozi. Symantec Mail Security for MS Exchange blends Symantec Antivirus iji nye mmesi obi ike email megide spyware, phishing, nje, na mwe iwe ọzọ mgbe ị na-enye ikikere azụzụ ọdịnaya na Exchange Server. Symantec Security bụ ihe mgbakwunye nke Symantec Nchedo Suite nke na-enye usoro nke ọta site n'ịkwụsị ihe ize ndụ ndị ebutere email na ma na-eje ozi dịka ntinye nke nchebe site na nsogbu ma ọ bụrụ na ọnọdụ nke njakịrị ihu na ụlọ ahịa na-eche. Symantec Nche na-emetụta Symantec AntiSpam, nke Brightmail ọhụrụ na-achịkwa, iji gbochie ọtụtụ n'ime spam na-abịanụ.
Nchịkọta dị mkpa nke ndị mmadụ maka usoro a bụ ndị ọkachamara na Ịzụ Ihe ọmụma (IT) ndị na-anwa ịchọọ ndị isi na-agwa ndị isi. Ndị ọzọ ndị nwere ike ịga akwụkwọ a gụnyere ndị isi nke IT na enyere aka ndị ọkachamara dị mkpa mkpa ịchọpụta banyere Exchange Server 2013. Ndị isi na-abata n'ime usoro a na-adabere na ha enweghi ihe dịkarịrị afọ 3 nke ahụmahụ na-arụ ọrụ na IT-na-abụkarị n'ókèala nke usoro ihe omume, nyere aka na-arụ ọrụ, ma ọ bụ usoro nhazi. A naghị atụ anya na ha ga-etinye aka na ụdị Exchange Server gara aga Nchịkọta inyeaka nke ndị mmadụ maka usoro a bụ ndị ọkachamara na-enwe olileanya iji nyochaa 70-341A: Microsoft Exchange Server 2013, Core Solutions, dị ka ihe dị iche iche, ma ọ bụ dịka isi akụkụ nke ihe ndị dị mkpa maka MCSE: Asambodo Microsoft Exchange Server 2013 ga-ewere usoro a dị ka ihe eji eme atụmatụ.
Usoro nkuzi Microsoft a na inye gị ihe mmụta na ihe nhazi iji dozie, zipụ, nlekọta, echekwa, ma mechie Microsoft Exchange Server 2013. Usoro a ga-egosi gị otu esi eme ndokwa Exchange Server 2013 wee nye gị data ị kwesịrị ị na-enyocha, debe, ma nyochaa Exchange Server 2013. Usoro a ga-enyekwa iwu, omume kachasị mma, na ntụgharị uche nke ga - enyere gị aka iwelie mmebi ma belata mmejọ na nsogbu nchedo na Exchange Server 2013.
Zipu ma lelee 2013 Exchange Server.
Hazie ma mepụta akụkụ ihe nkesa nke Igbe ozi.
Chọpụta ihe ndị bara uru, adreesị adreesị, na adreesị ndekọ na Exchange Server 2013.
Mee atụmatụ ma mechie Client Access server na Exchange Server 2013.
Jiri nlezianya dozie ma mepụta Microsoft Outlook Web App na ntanetị ịkọwapụta na iji Client Access
Nyochaa ma lelee ngwa ntinye ngwa ngwa nke Client Access na Exchange Sever 2013.
Jikere maka ọdachi na-emeghị ihe ọ bụla, mechie nkwado na mgbake maka Exchange Server 2013.
Nhazi na imepụta ozi iga na Exchange Server 2013 mkpakọrịta.
Dezie nchedo nche ozi, actualize antivirus solutions, ma kpochapụ mmemme nke spam.
Hazie nkwekọrịta ma chebe Exchange Server 2013.
Ihuenyo, dobe, ma nyochaa ọnọdụ Exchange Server 2013.
Ndị dị mkpa maka usoro a bụ ndị ọkachamara na Ịzụ Ihe ọmụma (IT) ndị na-achọ ka ha gbalịsie ike na-agwa ndị isi oche. Ndị ọzọ ndị nwere ike ịga akwụkwọ a gụnyere ndị isi nke IT na enyere aka ndị ọkachamara dị mkpa mkpa ịchọpụta banyere Exchange Server 2013. Ndị ọchịagha na-abanye n'ime usoro a chọrọ ka ha ghara inwe ihe dịkarịrị afọ 3 nke ahụmahụ na-arụ ọrụ na IT-na-emekarị na mpaghara nke usoro ihe omume, nyere aka na-arụ ọrụ, ma ọ bụ usoro ntụle. Enweghị atụ anya na ha ga-etinye aka na Exchange Server sụgharịa.
Òtù inyeaka nke ndị na-ahụ anya maka usoro a bụ ndị ọkachamara na-atụ anya ka ha nyochaa 70-341A: Microsoft Exchange Server 2013, Core Solutions, dị ka ihe dị iche iche, ma ọ bụ dịka ihe dị mkpa maka MCSE: Ndenye akwụkwọ Microsoft Exchange Server 2013 ga- Were usoro a dị ka atụmatụ ihe onwunwe.